Anshax xumada: Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee loogu talagalay barnaamijkaaga 'GNU / Linux Distro | Laga soo bilaabo Linux
Anshax xumada: Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee loogu talagalay barnaamijkaaga 'GNU / Linux Distro'
Maanta, waxaan sii wadi doonnaa hal dheeri oo dhejiskayaga la xiriira mowduuca «Jabsiga & Pentesting » ku saabsan Dunida ee Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux. Si tan loo sameeyo, waxaan diiradda saari doonnaa fikradda ah "Jabsiga Anshaxa" iyo Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee aaggaas oo aan u adeegsan karno annaga GNU / Linux Distro.
Iyo sababta GNU / Linux? Sababta oo ah waxaa si fiican loo ogyahay in xirfadlayaasha duurka ku «Jabsiga & Pentesting » doorbido GNU / Linux Windows, MacOS ama mid kale, shaqadooda xirfadeed, maadaama, waxyaabo badan, waxay bixisaa xaddi badan oo xakameyn ah on walxaha kasta oo ka mid ah. Sidoo kale, maxay aad u tahay sifiican loo dhisay iskuna dhafan hareeraheeda Isku xidhka khadka amarka (CLI), taasi waa, terminalkaaga ama qalabkaaga. Intaas waxaa sii dheer, waa badan tahay ammaan ah oo hufan maxaa yeelay waa mid bilaash ah oo furan, iyo sababta oo ah Windows / MacOS badanaa bartilmaameed soo jiidasho leh.
Kahor intaanan si buuxda u galin mawduuca ah "Jabsiga Anshaxa"Sida caadiga ah, ka dib markaad aqriso daabacaadan, waxaan kugula talineynaa inaad booqato qoraaladeena hore ee laxiriira mowduuca «Hubeeyaha », sida:
Jabsiga: Kaliya maahan inaad wax sifiican u sameyso laakiin inaad sifiican uga fikirto waxyaabaha
Waxbarashada Hacking: Dhaqdhaqaaqa Software-ka Bilaashka ah iyo Nidaamka Waxbarashada
1 Anshax-xumada Anshaxa: Kuwa wax jabsadaa waa kuwa wanaagsan, kuwa wax jabsadaana ma ahan!
1.1 Hackers iyo Pentesters
1.1.2 Kombiyuutarka jabsiga
1.1.3 tijaabiyaha qalinka
1.2 Waa maxay jabsiga anshaxa?
1.3 Bilaash, bilaash iyo bilaash barnaamijyada Hacking & Pentesting
Anshax-xumada Anshaxa: Kuwa wax jabsadaa waa kuwa wanaagsan, kuwa wax jabsadaana ma ahan!
Hackers iyo Pentesters
Kahor intaadan u dhaqaaqin dhanka "Jabsiga Anshaxa" waxaan cadeyn doonaa markale, erayga «Hacker y Pentester », si aysan u jirin jahwareer caadi ah oo badanaa ka dhaca aaggan Computer Science.
Si kooban, a Hackers guud ahaan waxaa lagu qeexi karaa:
"Qofka hanta aqoonta, farshaxanka, farsamada ama farsamada si aad ufiican ama sifiican ufiican, ama inbadan oo kamid ah isla waqti isku mid ah, oo had iyo jeer raadiya oo maareeya inuu ka adkaado ama ka adkaado iyada oo loo marayo barasho iyo ku celcelis joogto ah, isaga oo u daneynaya naftiisa iyo dadka kale , taasi waa, aqlabiyada." Dhaqdhaqaaqyada La Xiriira: Haddii aan isticmaalno Software-ka Bilaashka ah, innaguna ma waxaan nahay Hackers?
Halka, a Hacker marka la eego kumbuyuutarka waxaa lagu qeexi karaa:
"Qofka sUe lama huraan u tahay inay adeegsadaan oo xukumaan ICT-yada, si ay u helaan marin hufan oo wax ku ool ah oo laga helo ilaha aqoonta iyo hababka xakamaynta jirta (bulsho, siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo tikniyoolajiyad) si loo sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka u ah dhammaan dadka. Sidaa darteed, wuxuu had iyo jeer ku jiraa raadinta joogtada ah ee aqoonta, wax kasta oo la xiriira nidaamyada kombiyuutarka, farsamooyinkooda amniga, u nuglaantooda, sida looga faa'iideysto jilicsanaantan iyo farsamooyinka la xiriira, inuu naftiisa iyo dadka kaleba ka ilaaliyo kuwa garanaya sida loo sameeyo . " Jabsashada iyo Pentesting: La qabsadaada GNU / Linux Distro berrinkan IT-ga ah
Sidaa darteed, tani waxay naga dhigeysaa natiijo ahaan a «Pentester » es:
Xirfadle ku takhasusay cilmiga sayniska kombiyuutarka, shaqadiisuna ka kooban tahay raacida habab kala duwan ama talaabooyin gaar ah oo dammaanad qaadaya baaritaan wanaagsan ama falanqaynta kombuyuutarka, si sidan oo kale ah, si uu u awoodo inuu fuliyo dhammaan weydiimaha suurtagalka ah ee ku saabsan guul darrooyinka ama u nuglaanta nidaamka kombiyuutarka la falanqeeyay. Sidaa darteed, waxaa badanaa loogu yeeraa Hantidhawrka Aagagga Amniga. Shaqadooda, taas oo ah, daaqsintu runtii waa nooc ka mid ah jabsiga, kaliya in dhaqankani uu yahay mid gebi ahaanba sharci ah, maaddaama ay ogolaansho ka haysato milkiilayaasha qalabka in la tijaabiyo, marka lagu daro ujeedo ah inay dhibaato dhab ah u geysato daaweynta . Jabsashada iyo Pentesting: La qabsadaada GNU / Linux Distro berrinkan IT-ga ah
Waa maxay jabsiga anshaxa?
Asal ahaan "Jabsiga Anshaxa" Waa goobta waxqabadka ee qeexaya shaqada xirfadleydaas naftooda u huray iyo / ama loo shaqaaleysiiyay inay jabsadaan nidaamka kombiyuutarka, si loo aqoonsado loona dayactiro dayacanka suurtagalka ah ee la helay, kaasoo si wax ku ool ah uga hortagaya ka faa'iideysiga "Hackers xun" o "Dillaaliin".
Sidaa awgeed, ee "Jabsiga Anshaxa" Kuwa ku lugta leh waxay ku takhasusaan baaritaanka gelitaanka nidaamyada kombiyuutarka iyo softiweerka si loo qiimeeyo, loo xoojiyo loona hagaajiyo amniga. Taasina waa sababta loogu yaqaan badanaa Hackers de Koofiyad Cad, si ka duwan kuwa ka soo horjeedda, taasi waa, Hackers Criminal, oo inta badan wata magaca Koofiyad Madow. Ama haddii si kale loo dhigo, a "Anshaxa Hacker" badanaa waa a Pentester iyo a "Kharibayaasha anshaxa xun" waxaa loo qaadan karaa "Craker".
Ugu dambeyntiina, iyo in la dhammaystiro akhriska, waxaa xusid mudan in iyaguna ay jiraan waxa loogu yeero Hackers "Gray Gat" kuwaas oo inta badan udhaxeeya 2da dhinac, maadaama ay mararka qaar fuliyaan howlgalo inta badan iska hor imanaya xaga aragtida anshaxa, sida: Hack (khawano) kooxaha ay feker ahaan diidan yihiin ama wadaan "Hacktivist Cyberprotests" taas oo u sababi karta waxyeelo toos ah ama damaanad qaad qaar.
Bilaash, bilaash iyo bilaash barnaamijyada Hacking & Pentesting
Platform, Nidaam, Codsi iyo Software Scanning Software
Codsiyada Kormeerka Shabakada iyo Xog Uruurinta ilaha Dadweynaha
Barxadda Amniga Node
Nidaamka Badbaadinta iyo Kahortagga
Qalabka Sirdoonka, Honeyspot iyo inbadan
Adeegyada qabashada xirmooyinka shabakadda
Raad-raacayaasha Shabakadaha Maxalliga ah iyo kuwa Caalamiga ah
Nidaamyada uruurinta macluumaadka iyo maaraynta dhacdooyinka
Qarsoodiga taraafikada shabakadda ee loo maro VPN
Ka shaqeynta baakadka
PF_RING ZC (Nuqul Nuqul)
Nidaamyada ilaalinta isku dhafan ee xarumaha iyo server-yada - Firewall
Si aad wax yar uga sii ogaatid kuwan iyo kuwa kale, waxaad sahamin kartaa degellada soo socda, oo Ingiriis ah, oo leh liisas aad u wanaagsan, oo si fiican loo cusbooneysiiyey: 1 link, 2 link y 3 link.
Qaar kale ayaa horey uga faallooday Blog-ka
OWASP iyo OSINT: Waxbadan oo ku saabsan Amniga internetka, Asturnaanta iyo Magac la'aanta
Horeyba waa loo dhammeeyey liiska iyo daabacaadda, haddii qofna yaqaanno mid uun barnaamij kale oo xiiso leh oo u qalma in lagu daro liiska la sameeyay, waad naga tagi kartaa magaca faallooyinka si hadhow aan ugu darno. Iyo qoraalada kale ee mustaqbalka waxaan ku sharixi doonaa qaar ka mid ah si faahfaahsan. Dhanka kale, iyo ugu dambeyntii, xusuusnow in:
"Hackers ma aha oo kaliya inay sameeyaan wax fiican ama waxyaabo la yaab leh, taas oo ah, ma aha oo kaliya inay xalliyaan dhibaatooyinka iyo / ama ay dhisaan waxyaabo cusub ama xagjirnimo ah oo kuwa kale ay u arkaan wax adag ama aan macquul ahayn, laakiin markay sameeyaan iyaga waxay u fikiraan si ka duwan celceliska, taas oo ah, waxay u maleynayaan dhinaca "Xorriyadda, madax-bannaanida, amniga, asturnaanta, iskaashiga, baahinta". Haddii aad rabto inaad noqoto Hackers, waa inaad u dhaqanto sida lagu faray falsafadan nolosha, ku qaad dabeecadaas dhexdeeda, kana dhig qayb muhiim u ah jiritaankaaga." Jabsiga: Kaliya maahan inaad wax sifiican u sameyso laakiin inaad sifiican uga fikirto waxyaabaha
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Hacking Ético» iyo sida ugu macquulsan uguna macquulsan Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee aaggan oo aan u isticmaali karno GNU / Linux Distro, si aan u noqonno xirfadlayaal heer sare ah adduunka «Jabsiga & Pentesting »; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Anshax xumada: Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee loogu talagalay barnaamijkaaga 'GNU / Linux Distro'
Chrome 88.0.4324.150 waxay xalisaa u nuglaanta eber maalin
Nooca cusub ee KDE Codsiyada 20.12.2 hadda waa la heli karaa